Go,aamo Dhaxal Gal ah oo ka Soo Baxay Shirkii Jaaliyadda Somalida Ogadeeniya ee Magaalada Minneapolis Maalintii Sabtida June 6, 2009. – Rasaasa News
Jun 8, 2009 Jaaliyad, Jwxo, Minneapolis, Minnesoto, Ogaden, Somali, USA
Gabalka Minnesota ee dalka Maraykanka oo ay magaalo madax u tahay magaalada MiMinneapolis, ayaa waxaa ku nool Jaaliyada ugu balaadhan ee ka soo jeeda dhulka Somalida Ogadeeniya. Jaaliyadan oo ay madaxda maraykanku tusaale u soo qaadato marka laga hadlayo dadka cusub ee qaxootinimada ku yimid dalkan intii ka dambaysay dagaalkii labaad ee dunida, iyaga oo aad loogu amaano hurumarka la taaban karo ee ay ka gaadheen dhinacyada nolosha.
Jaaliyadan oo ah mid aad u balaadhan ayaa ah laf dhabrta halganka ay wado Jabhada wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo], waxayna awooday Jaaliyadu in ay xidhiidh adag dhax dhigto Jabhada iyo madaxda dalka Maraykanka, oo ay ka saarto waxa ay Itobiya ku doodo oo ah in ururka Jwxo yahay urur argagixiso ah, arintaas oo ay ku guul daraysatay xukuumada KT Malise.
Hadaba, iyada oo ay arintu sidaas tahay ayaa waxaa labadii todobaad ee ugu dambeeyey booqasho ku joogay gabalkaas Madaxda Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo] oo uu hor kacayey gudoomiyaha Jabhada Mudane Eng. Salaaxudiin Cabdiraxmaan Xaaji Macow iyo Hogaanka Arimaha Jaaliyaadka, Mudane Col, Cabdiwali Xuseen Gaas. Madaxdu waxay halkaasi u tageen in ay ka qayb galaan shirka Jaaliyada Somalida Ogadeeniya oo ka dhacayey W/Maraykan gaar ahaana gabalka Minnesoto magaalo madaxdiisa Minneapolis. shirka oo ay ka soo qayb galeen ergooyin aad u badan oo ka kala yimid dhul waynaha W/Maraykanka, waxaa kale oo iyana shirka ka soo qayb galay masuuliyiinta Jaaliyaadka Magaalooyinka kale ee dal weynaha w/Maraykanka.
Shirka oo dhacay maalintii sabtida ee bisha June 6, 2009, ayaa waxaa uu u dhacay jawi farxad leh iyo sidii loogu talo galay, waxaana kolkii uu shirku dhamaaday ka dib dib kulan gaaban isugu yimid ergooyinkii ka soo qayb galay shirka, iyaga oo dib u eegaya warbixinadii, hadaladii masuuliyiinta ergooyinka, hadaladii dadweynaha iyo su,aalihii la waydiiyeyba.
Ugu dambayntii, kolkii ay kulmiyeen warbixinadii,qiimeeyeena hadaladii iyo qoraaladii shirka, ayaa waxaa u suurto gashay in ay ka soo saaraan qodobo muhiim ah oo la soo koobay “War Mutiyeed ka Soo Baxay shirka kuna Aadan Xaalada Guud ee Dalka”
War murtiyeedkuna waxaa uu u qoraa sidan;
1.	Waxaa ay ergooyinka ka soo qayb galay shirka Jaaliyaadka Somalida Ogaadeeniya isku raaceen in taagero buuxda la siiyo Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo] iyo masuuliyiinteeda oo uu ugu horeeyo Mudane Salaaxudiin Cabdiraxmaan Xaaji Macow. Iyo in dadweynuhu si cad ula dagaalamo cid alaale cidii doonaysa in ay xagal haraatiyaan halganka xaqa ah ee ay wado Jwxo, iyada oo aan loo kala eegaynin mid ku kula dhashay iyo mid fog cadow waa cadow.
2.	Waxaa ay ergooyinkii ka soo qayb galay shirka Jaaliyaadka Somalida Ogadeeniya isku raaceen in taageero dhaqaale iyo mid shaqaba laggaga qayb galo hawlaha Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo],si loogu diyaar garoobo qabashada kalfadhigii 3aad ee Jwxo,si loogu dhiso maamul ay rasmi ah oo ka soo dhex baxa qaybaha dadweynaha degan dhulka Somalida Ogadeeniya.
3.	Waxaa ay ergooyinka shirku isku raaceen,in dhibaatooyinka haysta shacabka Somalida Ogadeeniya iyada oo loo bandhigayo dalalka Caalamka, gaar ahaana ay siyaasadoodu dhexdhexaadka tahay ee tix galiya xuquuqda dadka, iyaga oo saxaafada loogu muujinay dhibaatooyinka haysta dadweynaha sidda; Xasuuqa,bara kicinta,dilka,xadhiga iyo cuna qabataynta uu gumaysiga Itobiya ku hayo dadweynaha Soomaalida Ogaadeenya.
4.	In la ilaaliyo midnimada dadweynaha Somalida Ogadeeniya taas oo ah mida kaliya ee uu dadkeenu kaga guulaysan karo gumaysiga Itobiya, iyada oo laga qayb galinayo maamulka beelaha Somaleed ee degan Ogadeeniya iyada oo la eegayo kaliya wadaninimada iyo ka qayb qaadashada hawlaha Jabhada.
5.	In si wada jir ah looga hortago kuwa ka soo horjeeda hanaanka Dimoqraatiyadeed ee uu lee yahay halganka ay wado Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo], lagana horkeeno shacabka si uu u jabo hankooda foosha xun ee si xun wax u doonka ah.
6.	In la dhayo lana xoojiyo xidhiidhka u dhaxeeya dadweynaha Somalida Ogadeeniya iyo guud ahaan Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo] qaybaheed halganka kula jira gumaysiga Itobiya, hadii ay noqon lahayd mid qori wata iyo mid siyaasiyaba.
7.	Waxaa shirka lagu Cambaareeyey falalka foosha xun ee ay ku kacayaan, hogaankii hore ee Maxamed Cumar Cismaan iyaga oo isugu dhiibaya bulshada Somalida Ogadeeniya, kana samaynaya boggaga Internetka fooxumooyin uusan dadweynaheenu hore u lahayn. Waxaana looga digayaa in ayna bulshada dib u celinin, kala qaybinta bulshadana aanay waxba soo kordhin wax ay xumayso mooyee.
8.	Waxaa shirka lagu dhaliilay Aqoon yahanka iyo Hogaan dhaqameedyada bulshadu in ayna ka soo bixin kaalintii ay ku lahaayeen hogaanka bulshada , waayo hogaanka dadweynaha iyo talada ugu dambaynata ah iyaga ayaa leh, waxaana waajib ku ah iyaga [aqoonyahanka iyo odayaasha] in ayna gafin xilkooda ay bulshada ku lee yihiin.
9.	Shirka Jaaliyaadka Soomaalida Ogaadeeniya ee Waqooyiga Maraykanku wuxuu ugu baaqayaa walaalahooda Soomaaliyeey in ay dagaalka dhexdooda ah ku badalaan wadahadal baajiyaana dhiiga dadka Soomaaliyeed.
10.	Shirka Jaaliyaadka Soomaalida Ogaadeenya wuxuu ka codsanayaa Dawlada Maraykanka, EU, AU, UN, Amnesty iyo dawladaha Caalamka in ay wax ka qabtaan xasuuqa joogtada ah ee Shacabka Soomaalida Ogaadeenya ay ku hayso Dawlada Itoobiya,in Maxkamada la soo taago KT Meles Zenaawi iyo Saraakiisha masuulka ka ah xasuuqa ka dhacay Ogadeeniya 2006/8 ilaa iyo hadana ka socda.
Shirka Jaaliyaadka Soomaalida Ogaadeenya ee Waqooyiga Maraykanka